seychelles လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
seychelles လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC)
တစ်ဦးကဆေးရှဲလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) 1972 ၏ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေအောက်တွင်ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ အဲဒီအစားကုမ္ပဏီ၏ဤအမျိုးအစားအတိုကောက် "Pty သုံးပြီး" စီးပွားဖြစ်ကုမ္ပဏီ "ဟုခေါ်သောဆေးရှဲအတွက်, a" ကန့်အသတ်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီ "ဟုခေါ်ခံရ။ LLC "" မယ့်အစား၏ ", Ltd. ။ အနှစ်သာရမှာ, အကြင်ရှယ်ယာရှင်များကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကိုအပိုင်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Seychelles သည်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရှိ 100 ကျွန်းများကျော်ကွင်းဆက်ဖြစ်သည်။ တရားဝင်အားဖြင့်၎င်းကို“ Seychelles Republic” ဟုခေါ်တွင်သည်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းမှ 1976 တွင်လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သည်။ ၎င်း၏နိုင်ငံရေးစနစ်သည်တစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်းဖြစ်သောသမ္မတနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတွင်ဒီမိုကရက်တစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသောဥပဒေပြုလွှတ်တော်နှင့်သမ္မတတစ် ဦး ရှိသည်။
တစ်ဦးကဆေးရှဲလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှိပါတယ်:
အဘယ်သူမျှမအခွန်: Seychelles Pty ။ Ltd. (LLC) ကုမ္ပဏီသည်အခွန်အကောက်ကင်းလွတ်သောအမြတ်အစွန်းများကိုရရှိသည်။ အဖွဲ့ဝင်တိုင်းသည်နိုင်ငံခြားသား ဖြစ်၍ ၀ င်ငွေအားလုံးသည်ရှဲလ်ရှယ်လ်အပြင်ဘက်တွင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အမေရိကန်အခွန်ထမ်းများနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခွန်ကောက်ခံမှုခံယူရသူမည်သူမဆို ၀ င်ငွေအားလုံးကို၎င်းတို့၏အခွန်အာဏာပိုင်များထံတင်ပြရမည်။
100% နိုင်ငံခြားရေးပိုင်ဆိုင်မှု: အဆိုပါ Pty ။ , Ltd. နိုင်ငံခြားသားများကပိုင်ဆိုင် 100% ရှိနိုင်ပါသည်။
သီးသန့်လုံခြုံရေး: ရှယ်ယာရှင်များ '' အမည်များကိုမဆိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများ၌နေကြသည်မဟုတ်။
ကန့်သတ်တာဝန်ဝတ္တရား: ရှယ်ယာရှင်များ '' liabilities ကုမ္ပဏီ၏မြို့တော်၌မိမိတို့ရှယ်ယာဖို့ကန့်သတ်ထားပါသည်။
နှစ်ဦးကရှယ်ယာရှင်များမှာ: ရှယ်ယာရှင်များ၏နိမ့်ဆုံးအရေအတွက်သည်တစ်ဦး Pty ။ , Ltd. ဖွဲ့စည်းရန်နှစ်ခုဖြစ်ပါသည်
အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း: ဆွဲသွင်းပါဝင်မှတ်ပုံတင်ကြေး $ 150 အမေရိကန်ဒေါ်လာသကဲ့သို့အနိမ့်စေနိုင်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်: အဆိုပါဆေးရှဲ၏တရားဝင်ဘာသာစကား English ဖြစ်ပါတယ်။
Seychelles LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း
LLC ရဲ့ "လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ" သို့မဟုတ်ယင်း၏အတိုကောက် "LLC" တစ်ခုခုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ကုမ္ပဏီအမည်ဖြင့်အဆုံးသတ်ရမည်, သို့မဟုတ် "စီးပွားဖြစ်ကုမ္ပဏီ" သို့မဟုတ်ယင်း၏အတိုကောက် "Pty ။ Ltd. , "။
ပုံမှန်အားဖြင့်နိုင်ငံခြားသားများသည်ထိုကုမ္ပဏီအမျိုးအစားကိုစေးရှီးလ်ပြင်ပစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုကြသည်။ ထို့အပြင်လူတစ် ဦး သည် Seychelles တွင်နိုင်ငံသားများနှင့်နေထိုင်သူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပြုလုပ်ရန် Seychelles မှအကန့်အသတ်ရှိသောကုမ္ပဏီအားအသုံးပြုနိုင်သည်။
အဆိုပါဆေးရှဲခုနှစ်တွင်တစ်ဦး Pty ။ , Ltd. မှတ်ပုံတင်ရန်ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အဆိုပါမှတ်ပုံတင်အရာရှိအထွေထွေနဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ကြေငြာနှင့်အတူတစ်လျှောက်စာချွန်လွှာနှင့်အသင်းတစ်ခုဆောင်းပါးများ file ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါပြဌာန်းချက်ကြေငြာခြင်းအက်ဥပဒေအားလုံးလိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပြီကြေငြာထားတဲ့ရှေ့နေကပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါကြေငြာမယ့်သက်သေခံရှေ့နေများ၏ရှေ့မှောက်၌လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်ဖြစ်သည်။
ယင်းစာချွန်လွှာသို့မဟုတ်အစည်းအရုံးများဆောင်းပါးများဖြစ်စေသည့် Pty ။ , Ltd. ၏ subscriber များအား, အရာရှိများနှင့်ကနဦးနှစ်ဦးကိုဒါရိုက်တာကိုဖေါ်ထုတ်ရပါမည်
အခကြေးငွေ: ။ ဆွဲသွင်းပါဝင်အခါ, တစ်ဦး Pty Ltd မှအစုရှယ်ယာသို့ခွဲခြားတဲ့ကြေငြာမြို့တော်နှင့်အတူအမည်ခံမြို့တော် $ 150 အမေရိကန်ဒေါ်လာထက်မပိုပါဘူးဆိုရင် $ 2,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာချေ။ မြို့တော် $ 2,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာထက်ကျော်လွန်ပါက, $ 200 အမေရိကန်ဒေါ်လာပေါင်း $ 15 အမေရိကန်ဒေါ်လာမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုတိုးဘို့ $ 2,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာ။
အသင်းဝင်များ '' တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီ၏မြို့တော်၌မိမိတို့ရှယ်ယာဖို့ကန့်သတ်သည်။
ကုမ္ပဏီအမည် -“ လီမိတက်တာ ၀ န်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီ” သို့မဟုတ်“ LLC” ၏အတိုကောက်အားဖြင့်အဆုံးသတ်ရမည်။ သို့မဟုတ် "စီးပွားဖြစ်ကုမ္ပဏီ" သို့မဟုတ်၎င်း၏အတိုကောက် "Pty ။ Ltd. "။
ရည်ရွယ်ချက် - ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ကော်ပိုရေးရှင်း၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့် / သို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်များကိုသတ်မှတ်သည်။
ကန့်သတ်သောတာဝန်ဝတ္တရား - အသင်း ၀ င်များ၏တာ ၀ န်များသည်အကန့်အသတ်ရှိသည်ဟုကြေငြာပါ။
မတည်ငွေရင်း - သတ်မှတ်ထားသည့်ပမာဏဖြင့်အစုရှယ်ယာများအဖြစ်ခွဲခြားထားသည့်ငွေပမာဏ။
အစုရှယ်ယာများ - စာရင်းပေးသွင်းထားသူအမည်အပါအ ၀ င်သုံးစွဲသူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အနည်းဆုံး (၂) ခုထုတ်ပေးသည့်အစုရှယ်ယာအရေအတွက်။
လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း - စာရင်းပေးသွင်းသူတစ် ဦး စီသည်သက်သေခံချက်ရှေ့တွင်လက်မှတ်ထိုးရမည်။ ရှယ်ယာအရင်းအနှီးကိုကြေငြာပါကစာရင်းပေးသွင်းသူသည်သူ၏အမည်အားထုတ်ပေးသောအစုရှယ်ယာအရေအတွက်ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။
ကန့်သတ်အစုရှယ်ယာ: ရှယ်ယာများကန့်အသတ်တစ်ဦးကကုမ္ပဏီက၎င်း၏စာချွန်လွှာနှင့်အတူအသင်းတစ်ခုဆောင်းပါးများမှတ်ပုံတင်ရန်မရှိပါ။ သို့သော်မှတ်ပုံမရွေးချယ်ရာတွင်အသုံးပြုပုံကုမ္ပဏီကကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေပထမဇယား၏စားပွဲတင်တစ်ဦးမှဘာသာရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အသင်းမှတ်ပုံတင်ဆောင်းပါးများစားပွဲတင်တစ်ဦးကထုတ်ပယ်သို့မဟုတ် (ဖယ်ထုတ်လိုက်မဟုတ်စားပွဲတင်တစ်ဦး၏အစိတ်အပိုင်းများကိုလျှောက်ထားပါမည်) လုံးဝသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၌သူတို့ကိုလက်ခံနိုင်သည်။
လက်မှတ်ပေါင်း - အဆိုပါဆောင်းပါးများလည်းဆောင်းပါးများလက်မှတ်ရေးထိုးရမည်သူတစ်ဦးသကျသခေံများ၏ရှေ့မှောက်၌တစ်ဦးချင်းစီစာရင်းပေးသွင်းထားသူကလက်မှတ်ရေးထိုးထားရပါမည်။
နှစ်ခုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကနိမ့်ဆုံးကတော့ဆေးရှဲအတွက် Pty ။ , Ltd. ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်သည်။ ခွင့်ပြုအများဆုံးအဖွဲ့ဝင်များကငါးဆယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်များမဆိုတိုင်းပြည်ကနေနိုင်ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရန်ဒေသခံများအဘို့အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။
အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကမှတ်ပုံတင်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအစိုးရကကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်နိုင်သည့်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ရုံးမှာထိန်းသိမ်းထားခံရဖို့လိုအပ်ပါသည်။ အစုရှယ်ယာများကန့်အသတ်တစ်ခုမြို့တော်, ထိုမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူကုမ္ပဏီများလည်းတစ်ဦးချင်းစီအဖွဲ့ဝင်များကကျင်းပသည့်ရှယ်ယာအရေအတွက်ကပါဝင်သည်ရမည်ဖြစ်သည်။
Seychelles LLC ၏ဖွဲ့စည်းခြင်း
တစ်ဦးက Pty ။ , Ltd. မျှရှယ်ယာနှင့်အတူပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီအဖြစ်သို့မဟုတ်ရှယ်ယာရှင်များနှင့်အတူတစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်ရန်ထို option ရှိပါတယ်။ ကုမ္ပဏီ 20 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအဖွဲ့ဝင်များရှိပါတယ်လျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ပြီးတော့သူကထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ဆွဲသွင်းပါဝင် 20 အဖွဲ့ဝင်များကထက်လျော့နည်းသဖြင့်တပ်မက်လိုချင်သောသည်ဆိုပါကတစ်ဦး option တစ်ခုဖြစ်သည်။
အစုရှယ်ယာရှင်အများဆုံးအရေအတွက်ကို 50 ကန့်သတ်သည်။
အများပြည်သူအားဖိတ်ကြားခြင်းကိုတားမြစ်ထားသည်မှာကော်ပိုရေးရှင်းတွင်ရန်ပုံငွေများကိုဖုန်းခေါ် ဆို၍ သော်လည်းကောင်း၊ အတိအကျဖြစ်စေသော်လည်းကောင်းဖြစ်စေ၊ အကျိုးစီးပွားဖြစ်စေ၊
ရှယ်ယာထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ သို့သျောလညျးဆောင်လုလင်၏ရှယ်ယာထုတ်ပေးမရနိုင်ပါ။ ရှယ်ယာလျာထားခြင်းဖြင့်ကျင်းပနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေဒါရိုက်တာများနှင့် ပတ်သက်. ပြဌာန်းချက်မရှိပါ။ သို့သော်ရှယ်ယာရှိခြင်းတိုင်းကော်ပိုရေးရှင်းတိုင်းနှစ်စဉ်ပြန်လာနှင့်အတူအမည်များအပါအဝင်သူတို့ရဲ့ဒါရိုက်တာများနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို file ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီများဆိုအပြောင်းအလဲများကိုအပါအဝင်မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူမိတ္တူဖြည့်စွက်နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ရုံးမှာသူတို့ရဲ့ဒါရိုက်တာတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်သည်။
အဆိုပါအက်ဥပဒေအဆိုပါဆောင်းပါးများတွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြရပါမည်သည့်ဒါရိုက်တာများ '' ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့အစည်းအဝေးများဖြေရှင်းမပေးပါဘူး။
အစုရှယ်ယာသို့ခွဲခြားင်း၏မြို့တော်နှင့်အတူကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူနှစ်စဉ်ပြန်လာ file ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါပြန်လာရှယ်ယာမြို့တော်, ဒါရိုက်တာများနှင့်ရှယ်ယာရှင်များ၏ပြီးပြည့်စုံသောအသေးစိတျမြားပါဝငျရမယျ။
တစ်ဦးက Pty ။ , Ltd. ဒေသခံတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်ကိုခနျ့အပျမြားနှငျ့ဆေးရှဲအတွက်မှတ်ပုံတင်ရုံးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်သည်။
နှစ်စဉ်ယေဘုယျအဖွဲ့ဝင်အစည်းအဝေးများ (သို့မဟုတ်ရှယ်ယာရှင်များ) လိုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါအက်ဥပဒေစုစုပေါင်းမဲပေးအဖွဲ့ဝင်အနည်းဆုံးသုံးပုံနှစ်ပုံကအတည်ပြုအဖွဲ့ဝင်များက '' အထူးဆုံးဖြတ်ချက်တွေများအတွက်ပေးပါသည်။ အဆိုပါအက်ဥပဒေဒါအစည်းအဝေးတွင်လက်ရှိအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရိုးရှင်းသောအများစုသွားလုံလောက်သောဖြစ်လိမ့်မည်သာမန်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖြေရှင်းမပေးပါဘူး။
တစ်ဦး Pty ။ , Ltd. ဆေးရှဲနိုင်ငံသားများနှင့်နေထိုင်သူများနှင့်အတူစီးပွားဖြစ်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်ကတည်းကကြောင့်ဝင်ငွေအခွန်မှဘာသာရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သျောလညျးဆိုပါကအားလုံး၎င်း၏အဖွဲ့ဝင် (ရှယ်ယာရှင်များ) နိုင်ငံခြားသားတွေဖြစ်ကြပြီးအားလုံးဝင်ငွေတိုင်းပြည်ပြင်ပမှာဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်မရှိကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ်ဝင်ငွေအခွန်အကြွေးပါလိမ့်မည်။
ဌာနေဆေးရှဲကုမ္ပဏီများသည်ယင်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအပေါ်တစ်ဦးအပြား 15% ဝင်ငွေအခွန်ပေးဆောင်။ "ဌာနေကိုယ်စားလှယ်က" ကုမ္ပဏီထိန်းချုပ်ထားခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ 50% သို့မဟုတ်ပိုပြီးဆေးရှဲနေထိုင်သူများဖြစ်ကြပါလျှင်ဘယ်မှာအပျေါ၌မူတည်ပါသည်။ ၎င်း၏အမြတ်ငွေအနည်းဆုံး 90% ကိုဆေးရှဲ၏အပြင်ဘက်တွင်ရရှိခဲ့လျှင်သို့သော် "နေထိုင်သူ" ကုမ္ပဏီအဖြစ်သတ်မှတ်ထားလျှင်ပင်, တစ်ခုသာပြားချပ်ချပ် 1% ဝင်ငွေအစားပုံမှန် 15% နှုန်းချမှတ်ခဲ့ပါလိမ့်မည်။
Seychelles ရှိ LLC အကြောင်းနောက်ထပ်အချက်အလက်များ
အများပြည်သူမှတ်တမ်းများသာအစည်းအရုံး၏စာချွန်လွှာများနှင့်ဆောင်းပါးများပါရှိသည်။ အဆိုပါဒါရိုက်တာများကသာအမည်များ, ဤစာရွက်စာတမ်းများတွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ရှယ်ယာရှင်များအမည်များကိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများတွင်ထည့်သွင်းမထားပေ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လူထုမှတ်တမ်းများအများပြည်သူစစ်ဆေးခြင်းများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးကဆေးရှဲ Pty ။ , Ltd. ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးကဆေးရှဲလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (LLC) ဤအကြိုးခံစားခှငျ့ရှိပါတယျ: အဘယ်သူမျှမအခွန်, 100% နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု, ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှု, ရှယ်ယာရှင်များရဲ့ privacy နှစ်ခုရှယ်ယာရှင်များမရှိလိုအပ်သောဒါရိုက်တာများ, အနိမ့်မှတ်ပုံတင်အခကြေးငွေမျှမလိုအပ်နိမ့်ဆုံးမြို့တော်လိုအပ်သောနှင့်အင်္ဂလိပ်င်း၏တရားဝင်ဘာသာစကား ။